Ireo no toetra ara-teknikan'ny OnePlus X | Androidsis
Ny tsipiriany rehetra momba ny OnePlus X dia sivana iray andro aorian'ny fampisehoana azy
Alfonso ny voankazo | | OnePlus
Mbola kely sisa ny sisa hahitan'ny OnePlus X ny mazava. Antenaina fa hanolotra ny findainy vaovao ny OnePlus rahampitso 29 oktobra. Na izany aza taorian'ny famoahana farany, izay mampiseho ny afisy miaraka amin'ireo toetra ara-teknikan'ny OnePlus X, kely sisa no aseho.
1 Ny toetra teknika rehetra an'ny OnePlus X dia voasivana
2 Amin'ny vidiny inona no hahatongavan'ny OnePlus X any Eropa?
Ny toetra teknika rehetra an'ny OnePlus X dia voasivana
Hatreto dia ny vidiny ofisialy any Shina ihany no fantatray, 240 euro hanovana, misaotra amin'ny afisy tafaporitsaka. Ankehitriny dia misy andiana afisy vaovao mampiseho amintsika ireo toetra ara-teknika rehetra an'ny telefaona OnePlus X. Ary tsia, tsy ho gaga izahay.
Araka ny efa nampoizina, ny OnePlus X dia hanana efijery misy takelaka 5-inch izay hahatratra ny vahaolana 1920 x 1080 teboka, ho fanampin'ny fiarovana Corning Gorilla Glass. Eo ambanin'ny hood no ahitantsika processeur Qualcomm Snapdragon 801, SoC iray izay nampiasain'ny ankamaroan'ny sainam-pirenena tamin'ny 2014, ka na dia marina aza fa processeur taloha izy io, ny zava-bitany dia mihoatra ny ampy hiderana an'ity telefaona ity eo amin'ny faritra afovoan'ny sehatra.
Amin'ity processeur ity dia tsy maintsy ampidirintsika Fahatsiarovana RAM 3 GB miaraka amina fikirakirana fitehirizana roa, miaraka amina memoara 16 GB na 32 GB ao anatiny, azo alefa amin'ny alàlan'ny slot misy ny karatra micro SD.
Ny fakantsary lehibe indrindra dia voamarina ihany koa, namboarin'i a Lensa megapixel 13. Tsy mahalala na inona na inona momba ny fakantsary anoloana izy, na dia afaka manantena ny haka sary-tena na selfie kalitao aza isika noho ny solomaso 5-8 megapixel.
Tsy maintsy miandry rahampitso isika hanamafisana fa marina ireo toetra ara-teknika ireo, na dia mijery ny afisy aza, Heveriko fa tsy sandoka izany. Ary ny tena zava-dehibe amintsika dia ny vidin'ny OnePlus X io.
Amin'ny vidiny inona no hahatongavan'ny OnePlus X any Eropa?
Raha ny hevitro ny vidiny farany an'ny OnePlus X no hanamarika ny fahombiazany. Raha mahatratra ny tsena eropeana amin'ny vidiny manodidina ny 250 euro izany dia azoko antoka fa fahombiazana amin'ny varotra izany. Finday misy endri-javatra avo lenta amin'ny vidiny mahaliana toy izany? Ny safidy tsara indrindra ho an'ny ankamaroan'ny mpampiasa.
Tonga ny olana raha farany ny OnePlus X dia tia an'i Google amin'ny Nexus 5X sy 6P ary mampiakatra ny vidiny 100-150 euro. Amin'ity tranga ity, ny fividianana OnePlus X amin'ity vidiny ity, indrindra raha raisinay fa raha manana olana amin'ny terminal ianao dia tsy maintsy alefanao any Sina ny fanamboarana azy, dia hadisoana tanteraka izany.
Izao fotsiny isika dia mila miandry ny famelabelarana ofisialy ary hiampita ny rantsan-tanantsika mba tsy ho diso hevitra ry zalahy ao amin'ny OnePlus amin'io lafiny io. Inona ny hevitrao? Mihevitra ve ianao fa ny OnePlus X dia handany vola latsaky ny 300 euro rehefa mahatratra ny tsena?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » OnePlus » Ny tsipiriany rehetra momba ny OnePlus X dia sivana iray andro aorian'ny fampisehoana azy
fruteiapp dia hoy izy:
Ny OnePlus dia tsy nalefa hamboarina any Shina, fa any amin'ny Fanjakana Mitambatra.
Mamaly an'i fruteriapp
Huawei Mate 8 dia azo aseho amin'ny 5 Novambra
Tsy ho ela ianao dia afaka manoratra sy mizara ny lalaoo amin'ny Google Play Games